Muxuu Luka Modric xalay ku yiri Lionel Messi markii uu guddoonsiinayey abaal-marinta Ballon d’Or? – Gool FM
Muxuu Luka Modric xalay ku yiri Lionel Messi markii uu guddoonsiinayey abaal-marinta Ballon d’Or?
(Paris) 03 Dis 2019. Laacibka Kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa xalay markii uu guddoonsiinayey Lionel Messi abaal-marinta Ballon d’Or 2019 waxa uu u raaciyey erayo, iyadoo la isweydiinayo eryadaasi waxa ay ahaayeen.
Modric ayaa u sheegay Messi markii uu xalay u gacan gelinayey abaal-marinta Ballon d’Or : “Hambalyo waad u qalantaa”, kaddibna waxa uu u dhiibay abaal-marinta Ballon d’Or xiddiga ay kooxdiisu la xafiiltanto naadiga uu kabtanka u yahay Leo Messi.
Xiddiga khadka dhexe uga dheela Real Madrid iyo xulka qaranka Croatia ayaa abaal-marintan ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay waxaana isagoo labadiisa gacmood ku wada uu guddoonsiiyey xalay Lionel Messi oo aan abaal-marintan ku guuleysan saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Waxa uu Lionel Messi markiisii lixaad xalay qaaday abaal-marintan Ballon d’Or isagoo noqday xiddiga kaliya ee tiro intaas la eg ku guuleysta, waxaana uu hal abaal-marin ka sare maray CR7 oo ay min shan goor abaal-marintan horay u hanteen, Modric ayaana gacantiisa ku guddoonsiiyey Leo isagoo u raaciyey: “Hambalyo waad u qalantaa.
Modric intaas kuma ekaan, laakiin isagoo ku sii socda Roogga guduudan ayaa waxa uu hadalkiisa ku daray erayo kale waxa uuna yiri isagoo ka hadlay laacibka reer Argentina: “Messi waa mid cajiib ah oo aan la gaari karin, waxyaabaha uu sameeyeyna waa kuwo uu mudan yahay inuu abaal-marintaasi ku qaato.
“Waa mid ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa abid ee kubadda cagta soo mara, waana ugu hambalyeynayaa isaga guushaan uu gaaray.
“Waxaan halkaan u imid inaan abaal-marinta guddoonsiiyo ku guuleystaha igu xiga, maxaa yeelay kubadda cagta waa wax ku saabsan is-xushmayn, waana sababta aan halkaan u imid.
“Waxaana halkaan u imid inaan hambalyo iraado isaga (Messi) oo aan abaal-marinta guddoonsiiyo.” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Modric.